China FTIR-990AD FTIR Spectrometer Ukwenziwa kunye nefektri | Ezabasebenzi
Umsebenzi we-FTIR-990 oqinisekisiweyo we-infrared spectrometer luphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lweemveliso, yeyona FTIR inokhuphiswano kwihlabathi, ukufakelwa okulula, ukusetyenziswa okulula, ulondolozo olululo, i-FTIR yethu isetyenziswa ngokugwenxa zizinto zesayensi, i-bio amayeza, I-petrochemical, ukhuseleko lokutya kunye nezinye izixhobo zohlalutyo lwamashishini, ikwamkelwa yilebhu yunivesithi yophando lwezenzululwazi kunye nokufundisa.
I-FTIR enomgaqo-nkqubo we-interferometer kaMichelson, ukukhanya okukhutshwe ngumthombo wokukhanya ngu-Michelson interferometer kuphazamiso lwamehlo, vumela ukuphazamiseka kokukhanyisa iisampulu, umamkeli ufumana ukukhanya kokungenelela ngolwazi lwesampulu, emva koko ngesoftware yekhompyuter ngokuguqula ukufumana i-spectra iisampulu.
Uluhlu lweWavenwood Ngama-7800 ~ 375 cm-1
Isinxibelelanisi I-interferometer kaMichelson eneedigri ezingama-30 zeziganeko zezehlo
100%τUluhlu lokuthambeka komgca Ingcono kune-0.5τ% （2200 ~ 1900cm-1 ）
Isigqibo 1 cm-1
Ukuphindaphindeka kwenombolo yeWave 1 cm-1
Ukulinganiswa kwengxolo yomqondiso I-30000: 1 (i-DLATGS, isisombululo @ 4cm-1. Isampulu kunye nokuskena okungasemva kwimizuzu eyi-1 @ 2100cm-1)
Umtshini Isisombululo esiphakamileyo somtshini we-DLATGS kunye nobuncwane bokubonisa ubungqina
Isilinganisi I-KBr idityaniswe neGe (Yenziwe eMelika)
Umthombo wokuKhanya Ubomi obude, umthombo opholileyo we-IR opholileyo womoya (Wenziwe kwiUSA)
Inkqubo yeKhompyutha Isiguquli se-A / D se-24 bits kwi-500MHz, kwi-USB 2.0
Inkqubo ethembekileyo yokubonakalayo
Uyilo ludibanisa izinto eziphambili kwibhentshi ebonakalayo eyenziwe ngealuminiyam, izixhobo ziya kunyuswa ngokubekwa kwenaliti, akukho sidingo sokuhlengahlengisa.
I-interferometer ye-Michelson etywiniweyo, edityaniswe nobumdaka beplanga yokuchaka ubungqina kunye nebhokisi enkulu yearhente yobungqina bokufuma ukufumana amaxesha ama-5 amandla okufumana ubungqina.
Ifestile yokujonga ubushushu yamkela uyilo lwedigri eyi-7 eya phambili, ehambelana nomgaqo wobunjineli babantu, kulula ukuyigcina kwaye kulula ukuyibuyisela ngesihlunu se-molekyuli.
Uyilo lokutsala isampulu yebhin yesampulu inokunciphisa kakhulu ukuphazamiseka kwamanzi kunye nekhabhon dayoksayidi emoyeni kwiziphumo zovavanyo, kwaye yenzelwe ukuba ibe nkulu ukufikelela kwizincedisi ezahlukeneyo.
Ukusebenza kwamandla angaphantsi kwama-30W, ukhuselo lokusingqongileyo oluhlaza.
Izinto ezinzileyo eziphakamileyo
I-interferometer yokutywina isebenzisa i-USA engenisiweyo yegolide yetyhubhu ekhonjiwe ngokubonakalisa okuphezulu kunye nokuchaneka kwe-angular.
Ngokusebenza okuphezulu komthombo wobomi bokukhanya okuvela ngaphandle e-USA, ukusebenza okuqaqambileyo kufikelela kuma-80%.
I-laser yeVCSEL ingeniswe eMelika ngokusebenza okuphezulu.
Umtshini ophakamileyo we-DLATGS ongenayo uvela e-USA.
Isipili se-axis sisebenzisa inkqubo yokusika ye-SPDT, ngokusebenza ngokugqwesileyo kokubonakalayo kunye nokuhambelana kwenkqubo.
Uloliwe okhethekileyo wentsimbi ongenisiweyo, umthwalo onzima, ukukhuhlana okuphantsi, ukuqinisekisa uzinzo lwedatha kunye nokuphindeka.
Ukusebenzisana kwabantu ngekhompyuter kunye nesikhokelo sokusebenza, unokukhawuleza uqalise kwaye ube nezakhono nokuba sele uqhagamshele kwisoftware ye-FTIR.
Imowudi yokujonga idatha yokujonga ngokujonga ekhethekileyo, inkqubo yokufumana umhlaba.
Nika ilayibrari esemgangathweni emalunga ne-1800 yokubonisa simahla, kubandakanya uninzi lweekhompawundi eziqhelekileyo, iziyobisi, ii-oxides.
Sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeAtlas ze-infrared (iziqwenga ezingama-220000), ezigubungela amashishini ahlukeneyo, ukuhlangabezana nokufunyanwa ngokubanzi, abasebenzisi banokwenza ngokwezifiso ukufunyanwa kwakhona kwesiseko sedatha, ukuguquguquka kunye nokulula. Ilayibrari yeminwe ibandakanya: ilayibrari yesizwe ye-pharmacopoeia, ilayibrari yeSizwe yeZilwanyana ze-Pharmacopoeia, ilayibrari yerabha, igalari ye-gesi, igalari ye-molecular spectrum, iprotheyini kunye neelayibrari ye-amino acid, iThala leencwadi (izinto ezinobungozi, iikhemikhali, amayeza, njl. , Ithala leencwadi, ilayibrari ye-solvent spectrum, ilayibrari yezongezo zokutya ithala leencwadi, ipeyinti, ilayibrari njlnjl. (Njengesihlomelo).
Isoftware ene-GB / T 21186-2007 yesizwe yokulinganisa umsebenzi kunye no-JJF 1319-2011 wokulinganisa infrared standard calibration function.
UIindawo zokukhetha ezizodwa:
IZnse Crystal ATR
Uxwebhu MindalaCinezela umgubo kwiwindow ukuze uvavanye. Ububanzi be-13mm, ubukhulu be-0.1-0.5mm, ngaphandle kokonakalisa.
Yodaka ngodakaIsampulu enkulu eqinileyo ibe ngumgubo Ububanzi 70mm
Cinezela(Sicebisa ukuba uyithenge kwalapha ekhaya kuba inzima kakhulu)
I-oveni ye-IRUbushushu 70～250℃(Ungayithenga kwintengiso yendawo yakho)
Iseli engamanziIsampulu engamanzi iKbr iwindow, idesktop,Uluhlu lwamaza 7000-400cm-1Uluhlu lokuhambisa ukukhanya 2.5μm ~ 25μm
Isiseko sedatha ye-IR Spectrum (Optical)
I-Aldrich FT-IR yoQokelelo loQokelelo II ————————————- 18454
IHR Aldrich FT-IR Ingqokelela yoQokelelo I ——————————— 10505
HR Aldrich Hydrocarbons ———————————————-- 1199
HR Hummel Polymer kunye neZongezo ————————————- 2011
Ukwaleka kwe-HR kwimizi-mveliso ——————————————————– ka-1961
Ilayibrari ye-HR Nicolet Sampler ————————————————– 842
Izongezo zeHR Polymer kunye neePlasticizers ———————————- 1799
Izinto zeRubber Compounding Materials ————————————- 350
I-HR Specta Polymers kunye neePlasticizers yi-ATR ————————— 204
I-HR Specta Polymers kunye neePlasticizers ezibhalwe yi-ATR -————– 204
I-HR Sprouse iZongezelelo zePolymer ———————————————– 325
HR Sprouse Polymer ngu-ATR ———————————————- 500
HR Sprouse Polymer by Transmission ————————————- 600
Izongezo zePolymer kunye neePlasticizers —————————————- 1799
Ithala Leencwadi laseAldrich Polymers ————————————————————
IiSigma Steroids ———————————————————————3011.
IiSigma Iswekile kunye neeCarbohydrate ——————————————- 614
Egqithileyo Umlinganiso we-LCP-27 wobunzima bokuShukuma
Okulandelayo: I-LGS-7 Abbe Refractometer
LADP-18 Izixhobo zokuchonga iCurie Tempera ...
I-LIT-4 iMichelson Interferometer
I-LEEM-7 Solenoid yeMagnetic Field Measurement Appa ...
I-LEAT-1 yomoya ocacileyo wobushushu
Isixhobo se-LEAT-3 sokulinganisa ubushushu obuthile o ...
I-LCP-1 Optics Kit yovavanyo-Imodeli esisiseko